Boliiska oo isu diyaarinaya ka hortagga kooxo xagjir bidix ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Andreas Hedfors/Sveriges Radio.
Boliiska oo isu diyaarinaya ka hortagga kooxo xagjir bidix ah
La daabacay onsdag 7 augusti 2013 kl 09.37
Boliiska aagga Mälardalen ayaa awooddiisa isugu ururinaya sidii uu uga hortegi lahaa kooxo xagjir ah oo taabacsan mabaadi’da bidixda oo waqtiyadii ugu dambeeyey weeraro ku qaaday dad ay siyaasadda isaga soo horjeedaan. Waxaa ciidanka nabadsugidda laga soo xigtay dagaalka kooxaha xagjirka ahi uu badanaaba ka dhaco meelo khaas ah, ayna mararka qaarkood leeyihiin weji kala aargudasho.
- Uma aragno in ay kooxahaani khatar ku yihiin dimoqraadiayadda, sidii in ay waddanka kacaanka ka dhalinayaan ama taliska jira inqilaabayaan. Laakiin waxay khatar aad u weyn ku yihiin hannaanka dimoqraadiyadda laamaha bulshada. Sidaasna waxaa tiri Ahn-Za Hagström oo ciidanka nabadsugidda ee Säpo madax uga ah qaybta daraasad-samaynta.
Waxay ahayd bishii Febraayo ee sannadkaan kolkii ay koox bidix xagjir ahi weeraro qorshaysan la beegsatay goobo ku yaal aagga Mälardalen. Weeraradaas oo gaarayey ugu yaraan 30 waxay isugu jireen telefoon dad loogu hanjabo, walxo kiimiko leh oo meelo lagu tuuro iyo jirdil loo geysto dad siyaasadda ay isaga soo horjeedaan. Weerarkii ugu dambeeyey oo ka dhacay magaalada Västerås oo guri halkaas ku yaal waxyeelooyin loogu geystey.
Qof ka socda mid ka mid ah kooxaha xagjirka bidixda ah oo ay idaacadda P4 Sörmland wareysi la yeelatay ayaa ka hadlay weerar lagu qaaday guriga nin 27 sano jir ah ku yaal bannaanka magaalada Eskilstuna.
- Dad kooxdayada ka socda ayaa gurigiisa aaday si ay weerar ugu qaadan ninkaas, laakiin kolkaas guriga ma uusan joogin. Markii ay arkeen in uusan guriga joogin ayey doorteen in ay guriga wixii yaallay oo dhan burburiyaan.
Miyeysan dhici karin in haddii xoog la isticmaalo ay kooxaha kalena u xalaaleyneyso in ay iyaguna xoog isticmaalaan?
- U ma aragno qof naasiistaha ah in uu yahay bani aadan xun oo doortay shakhsiyad xumi, laakiin waxaan u aragnaa qof aamminsan siyaasad taayada ka soo horjeeda, oo nagu ah cadow siyaasadeed.
Hadda waxay ciidamada boliisku ka cabsiqabaan in weeraro aarsi ahi ka dhacaan aaggaas oo sidaas ay colaaddu ku sii xoogeysato. Dhanka kale ciidanka nabadsugidda ayeysan ka qarsooneyn sida ay wax u socdaan, waxayna bilaabeen in ay iskaashi la sameeyaan ciidamada boliiska gobolka.
Dhanka kale waxaa la sheegay in aysan dalka ka jirin tirakoob lagu sameeyey weerarada waxyeelooyinka leh oo ay geystaan kooxaha xagjirka ah. Ciidanka nabadsugidduna wuxuu sheegay in sanooyinkii dambe ay soo kordheen iskudhacayada iyo kala aarsiga u dhexeeya kooxaha xagjirka ah.
Balse Ahn-Za Hagström ayaa sheegtay in aysan xaaladdu khatar u ahayn sidii sannadihii sagaashameeyadii, kolkaas oo tiro rabshado xoog wata oo siyaasadaysani ka dhaceen Iswiidhen. Waxaana ka mid ah dilkii boliiska ee Malexander iyo dilkii Björn Söderberg oo ahaa qof aamminsan in shaqaaluhu ay la wareegaan ila waxsoosaarka.
- Xaalka maanta ee kooxaha xagjirka ahi ma maraayo marxalad xoog-isticmaal ba’an, laakiin lama oran karo dalka kama dhaco xoog-isticmaal. Si joogto ah ayuu xoog-isticmaal u dhacaa, laakiin si qarsoodi ah. Waxaa xoog-isticmaalkaas loo soo abaabulaa hab qorsheysan, badanaana waxaa la abbaaraa kooxo la iska soo horjeedo oo iyaguna xagjir ah. Waxaana laga yaabaa in ay taasi sabab u tahay in aan looga warhelin sida marka ay saamayso shakhsiyaad bulshada matala ama dad badan oo bulshada ka mid ah.